Maitiro ekuteerera kune redhiyo neiyo iPhone, iPad uye HomePod | IPhone nhau
Nzira yekuteerera redhiyo ne iPhone yako, iPad, uye HomePod
Nekusvika kweIOS 13, zvinhu zvakawanda zvachinja muisisitimu inoshandisa iPhone neIpad, uye chimwe chazvo chimwe chinhu chichava chakakosha kune avo vedu vanofarira kuteerera redhiyo vachiita chero rimwe basa. Izvozvi zvave kugona kuteerera kune yako yaunofarira chiteshi, kunyangwe yemuno, live uye pasina chikonzero chekutendeukira kune chero chechitatu-bato kunyorera.
Mukati meApple Music application isu tinogona kuwana chero chiteshi cheredhiyo chemuno, asi kusangana uku kuchiri "girinhi" uye hazvisi nyore kuita kudaro. Isu takaita vhidhiyo matinotsanangudza zvidiki zvidiki zvekugona kuteerera kunhepfenyuro kuburikidza neApple Music pane yako iPhone, iPad, uye kunyangwe HomePod.
Chinhu chekutanga kutarisa usati waenderera mberi ndechekuti iwe une yako iPhone kana iPad yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni inowanikwa. Kana zvirizvo, saka unogona kuvhura yako Apple Music app uye enda kune "Radio" tab. Ikoko iwe uchaona maApple Music mawairesi ayo Apple akagadzira (Beats 1 uye zvakafanana) asi kana iwe ukatsika pasi Iwe uchaona chikamu "Broadcasting" uko zviteshi zvakajairika zvichaonekwa. Iyo makumi mana, yakakwira FM, Chain 40… Ndezvimwe zvezviteshi zvaunogona kuona muchikamu chino, asi handizvo chete zvinoshanda. Kunyangwe zvisingaoneke, unogona kuteerera chero chiteshi chaunofungidzira.
Ndinoteerera sei chiteshi chisingaoneki muchikamu chino? Kana iwe ukashandisa iyo Apple Music yekutsvaga injini, haizokupe iwe mhedzisiro (kuda kuziva nekuti mune yapfuura Betas ivo vakaonekwa), asi pane yakapusa uye yakanangana mhinduro: bvunza Siri nezvayo. Udza Siri chiteshi chaunoda kuteerera uye chichairidza iyo nekukasira. Ndinobvunza sei? Zano rangu nderekuti "ndinoda kuteerera redhiyo ..." uyezve chiteshi, uye kana iwe uchida kuti ive yemuno, kubva kuguta raunoda. Kana iwe ukasataura izwi rekuti "redhiyo" unogona kunge uri kutamba podcast, kana Apple Music playlist. Nemirairidzo imwecheteyo unogona kuteerera redhiyo pane yako HomePod, chimwe chinhu icho vazhinji venyu chamirira kwenguva refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Nzira yekuteerera redhiyo ne iPhone yako, iPad, uye HomePod
Zvakanaka, ini handiwane chikamu chekutepfenyura ...
Uye zvakadiniko nezvevaya vasina Apple mimhanzi munyika medu ... Mune yangu nyaya ini ndaifanira kunyorera kuSpotify nekuda kwezvambotaurwa .... Ini ndinoda Apple, asi mune dzimwe nguva, iine mamwe marongero ... Pfff. kunhuwa.
Akanditumira chiziviso chekuti ndimise maseru data eApple Music ._.
Pindura kuna OscarV
Ini handinzwisise kuti sei ndichifanirwa kuudza siri nhepfenyuro dzandinoda kuteerera, hazvishande kuvatsvaga mumhanzi yekutsvaga bhawa, zvichinyonganisa.
Muchiitiko changu ndakacherekedza semhedzisiro yekutamba nemaredhiyo mune yekushandisa application kwemaminetsi mashoma, kukweva kwakanyanya pabhatiri mushure mekushandisa, kubvunza munzvimbo, iyo app yakadya 77% mune imwe nguva yeawa mana., kuve neakaremara meseji kumashure.
Ini ndichaenderera, izvozvi, nemamwe mafomu.
Dambudziko kubviswa kweapp muHong Kong
Vatengesi veApple vangave vachiona kuwedzera kwemirairo nekuda kwekuda kwakasimba kweiyo iPhone 11